China Chekunze chechitoro chechiratidzo cheChaoshifa vagadziri uye vatengesi |Zhengcheng
Zita rechigadzirwa: Chiratidzo chechitoro chekunze
Chishandiso: Supermarket, shop mall, gasi station, retail shop, grocery shopu kumberi
1.Chikuru chikuru chechigadzirwa ichi ndechokuti ruvara rukuru rwechikwangwani chakasviba masikati, asi usiku, mushure mokuvhenekera mwenje inotungamirirwa, ruvara rukuru rwechikwangwani chinova chichena, chinopenya zvikuru uye chinokwezva kutarisa.
2. Chikamu chechiratidzo uye bhokisi rechiedza rinoumbwa ne blister machine.Iyo acrylic color bar pane iyo logo inobatanidzwa nemaoko gare gare.
3. Hurefu hwechikwangwani chemusupamaketi kazhinji chakareba kwazvo uye hachina kutwasuka.Kusarudza Zhengcheng light box kunogona kugadzirisa dambudziko iri nemazvo.Kushandiswa kwebhokisi rechiedza chekona kune shanduko yechisikigo uye yakanaka kwazvo.
4. Kuisa led light box shop zviratidzo zvemberi mumasupamaketi zvichapedza magetsi akawanda.Iyo patented LED chubhu inoshandiswa muZhengcheng mwenje bhokisi inochengetedza 65% yemagetsi kana ichienzaniswa neakajairwa LED machubhu.
Iwe unogona kusarudza mabhokisi akareruka eurefu hwakakodzera zvichienderana nehukuru hwechitoro, uye splice mabhokisi emwenje ehukuru hwakafanana muchikwangwani, ane hunyanzvi hwekugadzira uye yunifomu yemwenje inoburitsa, izvo zvinosimudzira chimiro chechiratidzo.
Zvakapfuura: Tenga Chiratidzo Chemberi cheKH24H Chitoro
Zvinotevera: Outdoor led acrylic signboard
Blister Chiedza Bhokisi Signboard, Pharmacy Signboard, Vacuum Kugadzira Chiedza Bhokisi Signboard, Zviratidzo Zvakavhenekerwa, Kunze Kwechiedza Bhokisi Signboard, Supermarket Signboard,